Iindaba - Kufuneka ndenze ntoni emva kokuba ndigonywe i-COVID-19?
Nangona uninzi lwethu lulindele ngokuxhalabileyo usuku esinokucwangcisa ngalo idinga lokuthintela i-COVID-19, olu suku lungaphambili kunoko ucinga. Irhuluneli uGavin Newsom (uGavin Newsom) uthe ukuqala kwe-15 ka-Epreli, bonke abantu baseCalifornia abaneminyaka eli-16 nangaphezulu banokwenza idinga lokugonya i-COVID-19-ukuqala ngo-Epreli 1, 50 kunye nama-50 eminyaka ubudala. Abantu abangaphezulu kweminyaka yobudala baya kuba nakho ukwenza amadinga ngokukhawuleza.
Kwilizwe liphela, uMongameli Biden wabhengeza ukuba wonke umntu omdala e-United States uyakufaneleka ukufumana isitofu sokugonya ngaphambi kuka-Meyi 1, "Injongo kukuzisa i-United States kufutshane namanqanaba aqhelekileyo ngoJulayi 4."
Ngayo yonke le nto engqondweni, ungazibuza: ungayenza ntoni emva kokuba ugonywe ngokupheleleyo? Kwaye, okona kubaluleke ngakumbi, yintoni ongafanele uyenze?
Kubalulekile ukuba wazi ukuba awuyi kukhuselwa kwi-coronavirus kwangoko emva kogonyo lokuqala. Kungenxa yokuba kuthatha ixesha lomzimba wakho ukwakha ii-antibodies eziyimfuneko, ezinokukukhusela kwi-COVID-19.
NgokwamaZiko oLawulo noKuthintela iZifo, uthathwa ngokuba "ukhuselwe ngokupheleleyo" kwaye "ugonywe ngokupheleleyo" kwiiveki ezimbini emva kokuthatha iyeza lokuthintela iPfizer BioNTech okanye iModerna COVID-19 okwesibini, okanye iiveki ezimbini emva kwethamo elinye lokuthintela "uJohnson & Johnson (Johnson & Johnson / Janssen) isitofu sokugonya se-COVID-19.
Ke ibiyintoni ukungakhuseleki kwakho ngaphambi koko? Kwizitofu zokugonya zeModerna kunye nePfizer-BioNTech, idosi yokuqala iya kukunika uninzi lokhuseleko kwizifo ezinzulu, kwaye idosi yesibini iya kukusa apho. Ukongeza, iingcali zikholelwa ekubeni idosi yesibini inokwandisa ixesha lokugonya.
UWachter uthe kwiintsuku ezili-14 emva kogonyo lokuqala lweModerna okanye iPfizer-BioNTech, ukhuselwe ngumyinge wama-80%. (Ukuba ufuna ukuqaphela ukutsiba idosi yesibini, khumbula ukuba ityala lokugonya ngamayeza amabini, ke ukuqonda kwethu isiphumo sokugonya kuxhomekeke kwiidosi ezimbini.)
Idosi enye kaJohnson / Johnson inika ukhuseleko ngama-66% emva kweeveki ezimbini. Emva kweentsuku ezingama-28, inokuthintela ngokufanelekileyo izifo ezinobuzaza okanye ezomeleleyo ezinesiphumo se-85%. Funda ngakumbi malunga nokuba ukhuseleko lukhula njani emva kogonyo.
Ugqirha Peter uthe: “Kubaluleke kakhulu ukulinda iiveki ezimbini emva kwenaliti yokugqibela, kuba ayinguye wonke umntu ofanayo, kwaye nangona abanye abantu befumana izibonelelo zokuqala kwangoko ngokwenziwa kwee-antibodies ezichasene neeproteni zespike, ayisiyonyani le kubantu abaninzi. ” Chin-Hong, uprofesa weyeza kunye neengcali zezifo ezithathelwanayo kwi-UCSF.
“Asazi ukuba ngubani ozakufumana impendulo kwangoko. Ke ngoko, ixesha leeveki ezimbini linikwa wonke umntu emva kwenaliti yokugqibela, okusinika ukuzithemba ngokuziphatha njengabantu abakwilingo lezonyango, ”utshilo.
Ingcaciso emfutshane: Nika isitofu ixesha elithathayo ukukhusela umzimba wakho kwi-COVID-19. Kufuneka uthathe iyeza iiveki ezimbini ukuze ufumane isitofu sokugonya ngokupheleleyo.
Ngokwe-CDC, nangona izifundo zokuqala zibonise ukuba abantu abagonywe ngokupheleleyo abanakufane badlulise intsholongwane, kodwa iyaqhubeka. Yiyo loo nto sithetha ngabantu abagonyiweyo ngamanye amaxesha abasadinga ukuthatha amanyathelo othintelo.
Ugqirha Chin-Hong uthe: “Ngoku kukho ubungqina obuninzi bokuba akunakwenzeka ukuba kugonywe abantu abagonywe ngokupheleleyo ukuba banwenwe kubantu abangakhange bagonywe. Nangona kunjalo, ithuba lilonke lincinci kakhulu, utshilo uGqirha Chin-Hong. .
Ke ngoko, njengakuzo zonke iziganeko kubhubhane, kungcono ukuqhubeka ngononophelo ukukhusela abahlobo bakho, usapho, kunye noluntu olukhulu, kwaye ulandele izikhokelo ezingezantsi.
Inguqulelo emfutshane: Asikaqiniseki ukuba ukugonywa ngokupheleleyo kwi-COVID-19 kuya kukuthintela na ekusasazeni intsholongwane. Ke ngoko, kwezinye iimeko kusafuneka uthathe amanyathelo okhuseleko.
I-CDC yathi umngcipheko womntu ogonywe ngokupheleleyo one-COVID-19 "uphantsi" -kodwa eyona nto kufuneka uyazi ukuba naziphi na iimpawu ze-COVID-19.
Ukuba utyhilelwe umntu okrokrelwayo okanye ofunyaniswe ene-COVID-19, kodwa ugonyiwe kwaye awunazo iimpawu ezifana ne-COVID, awudingi ukuba uvalelwe wedwa kwaye awudingi kuvavanyelwa i-coronavirus. I-CDC ithi kungenxa yokuba umngcipheko wosulelo uphantsi kakhulu.
Nangona kunjalo, ukuba ubhenciwe kwaye uvelisa iimpawu, i-CDC ithi kufuneka uzihlukanise nabanye abantu kwaye wenze uviwo. Xa oku kusenzeka, kubalulekile ukuba wazise umboneleli wakho wezempilo ukuba ugonywe ngokupheleleyo.
I-CDC ikwabonelela ngesikhokelo esineenkcukacha kubantu abagonywe ngokupheleleyo abahlala okanye abasebenza kwiindawo zokuqokelela okanye kwiindawo zokusebenzela ezixineneyo.
Ngamafutshane: umngcipheko wokufumana i-COVID-19 emva kokuba ugonywe ngokupheleleyo usezantsi, kodwa kufuneka uqaphele iimpawu.
Ewe unga! Amaziko ase-US okuLawula nokuThintela izifo (CDC) izikhokelo zithi abantu abagonywayo banokuxhoma ngaphakathi ezindlwini nabanye abantu abagonyiweyo ngaphandle kwemaski kunye nokuhamba kude ekuhlaleni.
Umzekelo, amaZiko okuLawula nokuThintela izifo (CDC) athi ukuba ugonywe ngokupheleleyo, “akunakulindeleka ukuba umeme abanye abahlobo abagonywe ngokupheleleyo ukuba bazokutya isidlo sangokuhlwa ekhayeni lakho.”
Nangona kunjalo, iCDC isakhuthaza abantu abagonywe ngokupheleleyo ukuba baqokelele le ndibano kwelinye icala. Yathi oku kungenxa yokuba "iindibano eziphakathi okanye ezinkulu, kunye neendibano ezibandakanya abantu abangagonywanga abavela kwiintsapho ezininzi" ziya kwandisa umngcipheko wokusasaza i-COVID-19.
UGqirha Chin-Hong uthe: "Eli nani libalulekile kuba linani nje leempumlo nemilomo yabantu abavela kumaqela ahlukeneyo omngcipheko." “Okukhona usiba nabantu abaninzi (ugonyiwe okanye ungagonywanga), kokukhona abantu abaninzi bengaphenduliyo kwisitofu sokugonya kunye namathuba okuba maninzi amathuba okuba abantu basulele i-COVID. Ke lo ngumdlalo weenkcukacha manani. ”
Ukuba ugonyiwe kwaye uzifumanisa unemihlangano emininzi, iCDC icebisa ukuba uqhubeke nokwenza iindlela zothintelo ze-COVID-19, kubandakanya indawo yokuhlala kunye nokuhlala kude noluntu.
Ngamafutshane: ngumngcipheko omncinci ukuba umntu ogonyiweyo axhomeke kulowo ugonyelweyo, kodwa iya kugcina iqela lakho lincinci.
Ngokutsho kwamaZiko okuLawula nokuKhuselwa kwezifo (CDC), ukuba wena (umntu ogonywe ngokupheleleyo) undwendwela ikhaya lomntu ongagonywanga, kufanelekile ukuba ubatyelele ngaphakathi nangaphandle kwemaski. Ngamanye amagama, okoko abantu abangakhange bagonywe abakho semngciphekweni omkhulu wokufumana i-COVID-19.
Nokuba umntu ongagonywanga liqela elisemngciphekweni omkhulu, wena (umntu ogonyiweyo) usenokubandwendwela ngaphakathi, ukuba nje usebenzisa amanyathelo okuthintela i-COVID-19, njengokunxiba iimaski eziqinileyo nokugcina ubuncinci iinyawo ezi-6 kude , khetha indawo efanelekileyo yomoya kwaye uhlambe izandla zakho. Ukuba undwendwela nabantu abangagonywanga abavela kwiintsapho ezininzi, eli cebiso liyasebenza.
Kwaye, njengoko bekutshiwo ngaphambili, ukuba ubamba indibano enkulu okanye enkulu kunye nabantu abaninzi (nokuba bagonyiwe na okanye hayi), kuya kufuneka uqhubeke ukuthatha amanyathelo okhuseleko kwi-COVID-19, njengokufuduka eluntwini kunye nemaski.
Kukho i-infographic ephathekayo ephezulu kwi-CDC edwelisa ezi meko. Kutheni ungagcini kwifowuni?
Isiteyitimenti esifutshane: Ukuba akukho mntu usemngciphekweni omkhulu, unokuhlala nosapho olungagonywanga, musa ukunxiba imaski okanye ugcine umgama. Kukho ezinye izinto ekufuneka uzithathele ingqalelo.
Kutshanje, iinqila ezininzi zeBay Area zingene kumgangatho weorenji, zibonisa ukuba umngcipheko wokudluliselwa kwe-coronavirus "uphakathi". Oku kuthetha ukuba abantu banokubuyela kumabala emidlalo bhanyabhanya, iivenkile zokutyela, kunye nakumaziko okuba sempilweni, nokuba balufumene ugonyo okanye hayi, ngaphandle kwamandla ezi ndawo.
Ngamanye amagama, nokuba ugonyiwe ngokupheleleyo, kuya kufuneka uqhubeke nokwenza imikhwa yempilo yoluntu, "kubandakanya ukunxiba imaski, ukugcina umzimba wakho ukude (ubuncinci iinyawo ezi-6), ukunqanda izihlwele, ukunqanda indawo ezingenamoya ungenayo umoya, ukukhohlela kunye nokuthimla", kwaye Hlamba izandla zakho rhoqo. Ngokwengcebiso zeCDC.
Ingxelo emfutshane: ukuba ivulekile, ungaya! Nangona kunjalo, kuba singaqinisekanga ukuba abantu abagonyelweyo abazukuyisasaza i-COVID-19, kusafuneka sithathe amanyathelo okulwa intsholongwane, njengokunxiba iimaski kunye nokuhamba kude.
Ukuza kuthi ga ngoku, iCDC ayikasihlaziyi isikhokelo sayo sokuhamba. ISebe lezeMpilo laseCalifornia lisacebisa abahlali ukuba bangahambi ngaphezulu kweekhilomitha ezili-120 ukusuka ekhaya ngaphandle kokuba kungenxa yeenjongo ezisisiseko.
I-CDPH ikwalela ngokukhethekileyo abakhenkethi ukuba bahambe okanye bahambe ngokuzonwabisa, ke kuya kufuneka ulinde ukubhukisha iholide kude kutshintshe izikhokelo ezisemthethweni.
Ugqirha Chin-Hong weYunivesithi yaseCalifornia, eSan Francisco uthe isizathu sokuba i-CDC ingasikhuphi isikhokelo esitsha sokuhamba kungenzeka ukuba senzeke-kuba ungadibana nenani elikhulu labantu abagonyiweyo nabangagonyelwanga xa behamba-kwaye uphawu olubalulekileyo.
Uthe: "Ngexesha lezifo ezahlukeneyo e-United States, abafuni ukukhuthaza ukuhamba." “Kuba uhambo nokuhamba bezisoloko zinxulumene nogonyo lwangaphambili e-United States, banethemba ... lokungakukhuthazi oku kweli xesha libuthathaka. Uhlobo lomsebenzi. ”